ओलीलाई गगन थापाको निम्तो– कहाँ चमत्कार भएको छ, आउनुस् बहस गरौँ
बाह्रखरी - बिहीबार, चैत २६, २०७७
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘विकासका काममा चमत्कार कहाँ–कहाँ भएको छ बहसका लागि संसदमा आउन’ चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले मिथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै तथ्यांकमा रहेर बहसमा आउन चुनौती दिएका हुन् ।
ओलीले निर्माण सकिएको वर्षौंपछि उद्घाटन र ठेक्का नलाग्दै आयोजनाको शिलान्यास गरेको भन्दै थापाले आक्रोस पनि पोखे । “गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । मिथ्यांक ल्याएको छ । गफ चुटेको छ । हुँदा–हुँदा निर्माण सकिएर दुई वर्ष अगाडिदेखि चालू भएको पुलको उद्घाटन भएको छ, सिन्धुली र राप्तीको पुल । ठेक्का लागेको छैन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ,” सांसद थापाले भने, “ हुक्के चिलिमेहरू राखेर तपाईंले माथिबाट ठोक्ने तलबाट ताली बजाउने ? अपिन माननीय सांसदहरूले संसदमा आएर बालपत्रिका सुनाएर बस्ने होइन । कहाँ चमत्कार भएको छ, संसदमा आउनुस् बहस गरौँ ।” उनले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्यमा टेकेर आफूहरू बहस गर्न तयार रहेको बताए ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यस्तै, सरकारले ३ हजार ५ सय १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ५ सय २८ वटा झोलुंगे पुलबाहेकका पुल बनाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो ।
सांसद थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले दिनको १० किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भएको भनेर भनेपनि दिनको ३ किलोमिटर बाटो पनि कालोपत्रे नभएको बताए ।
बिहीबार, चैत २६, २०७७ मा प्रकाशित
माधव नेपाल समूहले स्पष्टीकरण दिने, तर पार्टी नफुटाउने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण दिने तर पार्टी नफुटाउने निष्कर्ष निकालेको... १२ मिनेट पहिले
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेपछि नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु छलफलमा जुटेका छन्... ३७ मिनेट पहिले
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपाल समूहले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेको आरोप... ५६ मिनेट पहिले
रमेश पौडेलको अध्यक्षमा नेपाल खेलकुद महासंघ गठन
काठमाडौं । पुरूषोत्तम पौडेलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केपी शर्मा ओली समूहले रमेश... १ घण्टा पहिले
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपाललाई कर्णाली प्रदेशका सांसद भट्काएको आरोप लगाएका छन् । ओलीले... १ घण्टा पहिले
एमालेले ३२ सांसदलाई सोध्यो– तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ? (पत्रसहित)
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय संघीय २७ सांसदसहित ३२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । एमालेले मंगलबार सांसदलाई स्पष्टीकरण... २ घण्टा पहिले